Amadwala ehlathi neVredefort Dome
Ngemuva kwe-Transvaal Supergroup kwafika i-Bushveld Complex, eyakhiwa lapho kutholakala idwala elikhulu elibunjiwe kusukela ngaphakathi kuze kube sezingenhla eziphezulu zeTransvaal Supergroup. Lo mjovo wedwala ube yizingxenye ezilula zeTransvaal Supergroup eyakha isakhiwo esiyinkimbinkimbi engamakhilomitha namaphesenti ayisishiyagalombili ePlatinum yezwe. Awe ma! Kodwa akuyona yonke injabulo nemidlalo.
Eminyakeni engaba yizigidi eziyizinkulungwane ezimbili ezedlule, inkanyezi enkulu yahlasela phansi endaweni engaba ngamakhilomitha ayikhulu namashumi amabili eningizimu-ntshonalanga yeGoli.Yashaya kakhulu kangangokuthi idwala laphakanyiswa, amakhilomitha ayishumi ngaphezu kwesimo salo sokuqala.
Umphumela wawuyi-Vredefort Dome, indawo enkulu kunazo zonke futhi eyaziwa kakhulu lapho inkanyezi yawa khona eMhlabeni (ekuqaleni zilinganiselwa ku-250km ukusuka ohlangothini kusiya ohlangothini, nakuba okuningi kwalesi sigodi sekugcwalisiwe). Lokhu kuthinteka kwavala isigodi semali egcinwe phansi yegolide, ngaleyo ndlela kwavikela ukuxhashazwa ekusebenziseni esikhathini esizayo.
Kodwa i-Vredefort Dome bekungakabhekwa njengendawo lapho kwakukhona khona umthelela futhi, phakathi neminyaka, abagqugquzeli abahlukahlukene bafaka imibono yabo siqu. Kodwa-ke, ukucwaninga kwakamuva kuye kwacacisa izinto kancane, futhi ukuphikisana mayelana nomsuka weDome kubonakala sengathi kuxazululwe abantu abafunda amatshe.
Nakuba ngisingaqiniseki ukuthi umthelela ungakha kanjani ummango hhayi isigodi, kufanele ngikhothamele ulwazi oluphakeme lwabantu abazi kangcono kunami futhi ngimemezele ukuthi iinkanyezi eyawa emhlabeni yenze lokhu ngemva kwakho konke!
Ukulandelana kwesayensi ephathelene nokwakheka komhlaba ngaphambi kokushayisana komhlaba kwe Vredefort
Eminyakeni eyizinkulungwane ezingamakhulu ayisishiyagalolunye, uMhlaba waqala ukupholisa phansi kancane futhi ukuqhuma kwesibhakabhaka sezulu kwadlula,...more
Ucwaningo Lokuqa laku-Vredefort Dome
Ngama-1950, incwadi ethi 'I-Target: Earth' yashicilelwe lapho abalobi bephakamisa ukuthi ama-dinosaurs(izilwane eza phila kudala) aphela ngenxa yomthelela omkhulu wenkanyezi enomsila....more
Kucatshangwa ukuthi inzika zenhlobo yokubusa zafakwa eminyakeni engaba ngu-3.07 izigidi zezigidi ezedlule,...more
Indlela Izinkanyezi ezinomsila zithinta ngayo umhlaba
Uma ubheka emkhathini ngobusuku obumnyama, konke kubonakala ngokuthula. Izinkanyezi zikhazimula esibhakabhakeni esimnyama esicacile futhi ububanzi bobukhulu baso bungaphezu kwekhanda lakho....more
Ukuphenya kweVredefort Dome
Emuva eNingizimu Afrika, nokho, ukuthuthuka kwenzakalo yesayensi kubonakala sengathi kwasidlula. Ngo-1916, u-S.J. Shand uqale wachaza umphumela wokuqhaqhazela-chungechunge obizwa ngokuthi...more
Njengoba inkanyezi eqhumayo yeVredefort yafika emhlabeni eMhlabeni, isivinini sayo sasingaba phakathi kwamakhilomitha angu-40 000 no-270 000 ngehora....more
Ukuphikisana Kwezingqalasizinda zeVredefort Dome
Izici ezijwayelekile ezingokwemvelo zeVredefort Dome zaziye zaphawulwa ososayensi ekuqaleni kuka-1878. Kwenzekile ngokucacile esifundeni, kodwa akekho umuntu ongavumelana ngalokho....more
Umthelela we Vredefort
Eminyakeni eyizigidi zezigidi ezimbili ezidlule, kwakungekho nhlobo lwezimila emhlabeni, futhi isibonakaliso sokuphila kuphela besingesebhaktheriya....more
Vredefort nensimu zeGolide
INingizimu Afrika yindawo enenhlanhla kakhulu. Siye sabusiswa ngekhaya elizinzile kuleli zwekazi elidala kunazo zonke emhlabeni, kude nanoma yikuphi ukuzamazama komhlaba noma izintaba-mlilo....more
Inguqukosimo nama shattercones-eVredefort Dome
Ngaphandle komgodi waseVredefort, umthelela ushiye ngamuva imikhakha eminingi, eqoshiwe emadwaleni. Lezi zici zitholakale kwezinye izindawo eziningi ezinomthelela emhlabeni wonke, futhi manje zibhekwa...more